Umhlahlandlela I Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke Beginner sika-Google Analytics - China Litbright ikhandlela (Shijiazhuang)
Litbright ikhandlela (Shijiazhuang) Co., Ltd
Isonto / Insika ikhandlela
Ukuhlobisa ikhandlela / Art ikhandlela
Uma ungazi ukuthi yini le-Google Analytics, baye ayifakiwe kuwebhusayithi yakho, noma ozifakile ke kodwa ungalokothi ukubheka idatha yakho, bese lokhu okuthunyelwe ngawe. Nakuba kunzima abaningi bakholwe, kusenabantu kumawebhusayithi kungukuthi i-Google Analytics (noma izibalo, ngaleso sento) ukulinganisa sezimoto zabo. Kulo post, sesikude ukubheka Google Analytics kusuka iphuzu saqala ngokuphelele umbono. Kungani uyidinga, kanjani it, indlela yokuyisebenzisa, futhi ukuzama izinkinga ezivamile.
Kungani zonke Umnikazi wewebhusayithi idinga i-Google Analytics
Ingabe unayo ibhulogi? Ingabe unayo iwebhusayithi static? Uma impendulo inguyebo, kungakhathaliseki ukuthi ukusetshenziswa siqu noma ibhizinisi, kuyobe sekudingeka-Google Analytics. Nazi ezimbalwa nje imibuzo eminingi mayelana kuwebhusayithi yakho ukuthi ungakwazi ukuphendula i-Google Analytics.
Bangaki abantu vakashela website yami?
Ngabe lezi zivakashi zami baphile?
Ingabe Ngidinga iwebhusayithi kuselula?
Yini amawebhusayithi ukuthumela traffic kuya website yami?
Yimaphi amaqhinga ukumaketha ukushayela traffic kakhulu website yami?
Yikuphi Amakhasi kuwebhusayithi ami ethandwa kakhulu?
Zingaki izivakashi Ngihlangene ibe imikhondo noma amakhasimende?
akazange lezi zivakashi zami ukuguqulela Uvelaphi futhi niqhubeke website yami?
Ngingakuthuthukisa kanjani isivinini iwebhusayithi yami?
Yini okuqukethwe blog izivakashi zami zibe njengezezindluzelekazi kakhulu?
Ziningi, imibuzo eminingi ezengeziwe Google Analytics ukuphendula, kodwa lena iyilabo ukuthi zibaluleke kakhulu abanikazi kakhulu iwebhusayithi. Manje ake sibheke ukuthi ungathola kanjani i-Google Analytics kuwebhusayithi yakho.
Indlela ukufaka i-Google Analytics
Okokuqala, udinga i-akhawunti ye-Google Analytics. Uma une-akhawunti yokuqala ye-Google oyisebenzisa kwamanye amasevisi afana ne-Gmail, Google Drive, Google Ikhalenda, Google +, noma i-YouTube, kufanele usethe i-Google Analytics yakho usebenzisa leyo akhawunti ye-Google. Noma uzodinga ukudala entsha.
Lokhu kumele kube i-akhawunti ye-Google Uhlela ukulugcina phakade nokuthi kuphela ukufinyelela. Ungahlala nika amandla okufinyelela ku-Google Analytics yakho kwabanye abantu ngezansi komgwaqo, kodwa ungafuni omunye umuntu ukulawula ke.
Ithiphu Big: ningavumeli muntu wakho (umklami sakho sewebhu, sewebhu lonjiniyela, sewebhu aphethe, SEO umuntu, njll) udale i-akhawunti ye-Google Analytics kuwebhusayithi yakho ngaphansi kwe-akhawunti azo e-Google ukuze bakwazi "ukuphatha" yona. Uma futhi lo muntu ingxenye izindlela, bazothatha Google Analytics data nabo, futhi kuyomelwe ukuba baqale kabusha.
Setha i-akhawunti yakho futhi impahla
Uma une-akhawunti ye-Google, ungaya ku-Google Analytics bese uchofoza Ngena ngemvume ku-inkinobho ye-Google Analytics. Uyobe wabingelela ne izinyathelo ezintathu kumelwe uthathe usethe i-Google Analytics.
Ngemuva kokuthi uchofoze inkinobho Ngena ngemvume, kuzodingeka ugcwalise ulwazi kuwebhusayithi yakho.
Google Analytics inikeza Ukuhleleka kokuhlala ukuhlela i-akhawunti yakho. Ungaba-100 ama-akhawunti e-Google Analytics ngaphansi kwe-akhawunti yakwa-Google eyodwa. Ungaba kufika ku-50 iwebhusayithi izakhiwo ngaphansi omunye akhawunti ye-Google Analytics. Ungaba-25 ukubukwa ngaphansi omunye iwebhusayithi impahla.
Nazi zimo ezimbalwa.
Isimo 1: Uma une eyodwa iwebhusayithi, udinga kuphela akhawunti eyodwa ye-Google Analytics nomunye iwebhusayithi impahla.
Indlela yesi-2: Uma une amawebhusayithi ezimbili, ezifana omunye ibhizinisi lakho futhi omunye ngokusebenzisa kwakho, ungase ufune ukudala ama-akhawunti amabili, uqambe "123Business" munye "Okomuntu siqu". Khona-ke wena uyomisa kuwebhusayithi yakho ibhizinisi ngaphansi akhawunti 123Business futhi kuwebhusayithi yakho siqu ngaphansi kwe-akhawunti yakho siqu.
Indlela yesi-3: Uma une amabhizinisi amaningi, kodwa ngaphansi kuka-50, futhi ngamunye wabo kusayithi elilodwa, ungase uthande kulahleni konke ngaphansi akhawunti yebhizinisi. Khona-ke babe ne-akhawunti Personal for amawebhusayithi akho siqu.
Simo 4: Uma une amabhizinisi amaningi futhi ngamunye kubo has inqwaba amawebhusayithi, kube ingqikithi amawebhusayithi ezingaphezu kuka-50, ungase ufune ukubeka ibhizinisi ngamunye ngaphansi kwe-akhawunti ayo, ezifana 123Business akhawunti, 124Business akhawunti, nokunye.
Ayikho enye indlela okulungile noma okungalungile ukuze usethe i-Google Analytics kukhona akhawunti-ke nje nokuthi ufuna ukuhlela amasayithi akho. Ungahlala ukuqamba kabusha ama-akhawunti akho noma izakhiwo ngomgwaqo. Qaphela ukuthi awukwazi ukuhambisa impahla (iwebhusayithi) komunye akhawunti ye-Google Analytics enye-ke kuzofuneka ukuthi usethe isakhiwo esisha ngaphansi akhawunti uhlulwe idatha zomlando wena eqoqwe kusukela impahla yasekuqaleni.
Ukuze Umhlahlandlela saqala ngokuphelele sika, sesikude ukuba singaphethi unayo iwebhusayithi kuphela kudingeka ekubukeni okukodwa (okuzenzakalelayo, buka idatha. Ukusetha ngabe izobukeka ngale ndlela.
Ngezansi lokhu, kuzodingeka ukhetho ukumisa lapho idatha yakho ye-Google Analytics zinganikezwa.
Faka ikhodi yakho yokulandela
Uma usuqedile, uzokwazi chofoza inkinobho Thola Ukulandelela ID. Uzothola okuzivelelayo imigomo ye-Google Analytics nemibandela, wena kufanele uvume. Khona-ke uzothola ikhodi yakho ye-Google Analytics.
Lokhu kumele afakwe kuwo wonke amakhasi kuwebhusayithi yakho. Ukufakwa kuzoya kakhulu ngokuthi yikuphi uhlobo iwebhusayithi onayo. Ngokwesibonelo, ngiba iwebhusayithi WordPress esizindeni yami usebenzisa Genesise Framework. Lolu hlaka has endaweni ethize ukuze ungeze unhlokweni kanye unyaweni imibhalo website yami.
Kungenjalo, uma une WordPress esizindeni sakho siqu, ungasebenzisa i-Google Analytics Yoast plugin ukufaka ikhodi yakho kalula kungakhathaliseki ukuthi ingcikitsi nohlaka oyisebenzisayo.
Uma une website eyakhiwe amafayela HTML, uyoba wengeze ikhodi yokulandela phambi </ head> Ithegi ku ngamunye amakhasi akho. Ungenza lokhu ngokusebenzisa uhlelo umbhalo umhleli (ezifana TextEdit ye-Mac noma incwajana-Windows) bese ulayisha ifayela aphethe yakho yewebhu usebenzisa uhlelo FTP (okufana asFileZilla).
Uma une Shopify e-commerce esitolo, uzoya izilungiselelo zakho Online Store bese unamathisela ku ikhodi yakho yokulandela lapho ecacisiwe.
Uma une-blog on Tumblr, uzoya ibhulogi yakho, chofoza Hlela inkinobho Theme ngakwesokudla phezulu ibhulogi yakho, bese ufaka nje ID ye-Google Analytics ku izilungiselelo zakho.
Njengoba ubona, ukufakwa kwe-Google Analytics iyahlukahluka esekelwe platform oyisebenzisayo (okuqukethwe uhlelo lokuphathwa, iwebhusayithi Umakhi, isofthiwe e-commerce, njll), isihloko oyisebenzisayo, futhi ama-plugin oyisebenzisayo. Kufanele akwazi ukuthola imiyalelo elula ukufaka i-Google Analytics nakwenye iwebhusayithi ngokwenza ukusesha kwewebhu platform yakho + ukuthi ukufaka i-Google Analytics.
Emva kokufaka ikhodi yakho yokulandela kuwebhusayithi yakho, uzofuna ukumisa encane (kodwa ewusizo kakhulu) ukubeka kwiphrofayli iwebhusayithi yakho ku-Google Analytics. Lena Goals yakho kulungiselelwa. Ungathola ngokuchofoza isixhumanisi Admin phezulu i-Google Analytics yakho bese ngokuchofoza Goals ngaphansi Buka ikholomu iwebhusayithi yakho ke.
Amagoli uzokutshela Google Analytics lapho okuthile okubalulekile okwenzekile kuwebhusayithi yakho. Ngokwesibonelo, uma unayo iwebhusayithi lapho ukukhiqiza imikhondo ngokusebenzisa ifomu contact, uyofuna ukuthola (noma ukudala) a siyabonga ikhasi izivakashi ukuqeda phezu uma ziye uthumele ulwazi labo lokuxhumana. Noma, uma unayo iwebhusayithi lapho othengisa imikhiqizo, uyofuna ukuthola (noma ukudala) wokugcina siyabonga noma isiqinisekiso ikhasi izivakashi umhlaba phezu uma sebengene usuqede ukuthenga.
isikhathi Iposi: Aug-10-2015
RM 702, Bldg, A Lingshi Comm.Bldg., NO.351 ingqikithi Road, Shijiazhuang, Hebei, China